November 4, 2020 - Amawpyay
ထိုင်းထီဘတ်(၆)သန်းဆု မြန်မာလုပ်သားဇနီးမောင်နှံဆွတ်ခူး ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ်သား ဇနီးမောင်နှံ ထိုင်းထီ ပထမ ဆုဘတ်(6)သန်းဆု”နှစ်စောင်တွဲ ဘတ်(12)သန်း” ဆွတ်ခူးခဲ့ ရာ AACမဟာမိတ် အဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်၍ ထီဆု ထုတ်ပေး ပါရန် အကူအညီတောင်း ခံခဲ့ AAC မှဌင်းတို့ နေထိုင်ရာ ဒေသသို့ သွားရောက် ကြိုဆို ပေးခဲ့ပြီး ယနေ့ ထီဆုငွေ များ ထုတ်ယူပေးပြီး မြန်မာပြည်သို့ ထီဆုငွေများ ယနေ့ချက်ချင်းပဲ လွှဲပို့ပေး လိုက်ပါပြီ ထီပေါက် ခဲ့သော နေရာ ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း စူရတ် ဌာနီခရိုင် ဆီအုန်းခြံမှာအလုပ်လုပ်ရင်း ထီသည်မှာ ကံစမ်း ခဲ့တာပါ၊ ထိုင်းမှာ ရောက်နေတာ (7)နှစ်ကျော် ရှိနေပြီး …
ယောင်္ကျားလေးတွေကို ယုံကြည်မှု အပြည့်အ၀ မပေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
ယောင်္ကျားလေးတွေကို ယုံကြည်မှု အပြည့်အ၀ မပေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများ ဘယ်လိုပဲ ခေတ်မီ တိုးတက်တဲ့ ခေတ်ကြီး ဖြစ်ပါစေ၊ မိန်းကလေးတွေထက် ယောင်္ကျားလေးတွေက ပိုပြီး အခွင့်အရေးတွေ ရနေတာမျိုးနဲ့ အားသာမှု ရှိနေတာမျိုး ရှိနေဆဲပါပဲ။ ချစ်သူထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေအဖို့ ကောင်လေးတွေကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ယုံကြည်မှုကို အပြည့်အဝ မပေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ ရှိနေပြီး ကိုယ်က မိန်းကလေးဆိုတဲ့ အသိကို ဒီအချက်တွေကြောင့် အမြဲ တွေးထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ၁။ လူကောင်းချည်းပဲ ရှိမနေဘူး။ ကိုယ်က ချစ်မိသွားလို့ ကိုယ် ချစ်တဲ့သူက လူကောင်းပါလို့ လွယ်လွယ် ပြောလို့ မရပါဘူး။ ငယ်ငယ်တည်းက သိလာတဲ့ သူတွေဆိုရင် ပြောလို့ ရပေမယ့် …
BUBBLE TEA ကြိုက်တဲ့ လူတွေ သိထား သင့်တဲ့ BUBBLE အလုံးလေးတွေ ရဲ့ ကြောက်စရာ အန္တရာယ်
BUBBLE TEA ကြိုက်တဲ့ လူတွေ သိထား သင့်တဲ့ BUBBLE အလုံးလေးတွေ ရဲ့ ကြောက်စရာ အန္တရာယ် သောက်မိသူ ကို အသက်သေ စေတဲ့ အထိဖြစ်စေနိုင် တဲ့ မစ်ရှိတ် အအေးဘူး က အလုံးလေးတွေ ရဲ့ အန္တရာယ် အအေးဆိုင်တွေ မှာ မစ်ရှိတ်တွေ သောက်တဲ့ အခါ သာကူစိအကြီးစားကြီးလို အိကျိအိကျိ နဲ့ အလုံးလေးတွေကို တွေ့မြင်ဖူးကြမှာပါ။ အထူးသဖြင့် Bubble Tea လိုအအေးတွေ မှာ တွေ့ ရပါတယ်။ သူက စားလို့ လည်းကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့် လူငယ်တွေ တော်တော်များများ ထဲက မိန်းကလေးတွေက တော့ နှစ်သက်ကြပါတယ်။ …
မိန်းမကောင်းတို့ရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ လက္ခဏာ(၅)မျိုး
မိန်းမကောင်းတို့ရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ လက္ခဏာ(၅)မျိုး လောကကြီးမှာ မိန်းမ တွေ ပေါများပေမယ့် မိန်းမ ကောင်းတွေက တော့ ရှားပါးလွန်း ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်လို အချက်မျိုးတွေ ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကို မိန်းမကောင်းလို့ ခေါ်ကြ ပါသလဲ ? မိန်းမ ကောင်းလေးတွေသာ ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ အချက်လေးတွေကိုတော့ အခုပဲ ဖတ်ကြည့် လိုက်ပါတော့ နော် ။ (၁) ကြင်နာတတ်တယ်” မိန်းမ ကောင်းလေးတွေဟာ ကြင်နာ သနားတတ်တဲ့ နှလုံးသား ရှိပြီး ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေ မလုပ်တတ် ကြပါဘူး ။ (၂) စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း ရှိတယ်” အဆင်ခြင်မဲ့ …
အတင်းတုပ်ခြင်းဖြင့်ရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ မိန်းကလေးတော်တော် များများဟာ မွေးရာပါ အတင်းပြော ရတာကို နှစ်သက် သူတွေဖြစ်ကြ ပါတယ်။ သူများ မကောင်းကြောင်းကို တမင် လုပ်ကြံ ဖန်တီးပြီး ကောလာ ဟလပြော ဆိုတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ စိတ်သန့်သန့်နဲ့ အတင်း တုပ်ခြင်းဟာ အကျိုးကျေးဇူး အများကြီးရှိ ပါ တယ်။ ဘာတွေလဲ ဆိုတာ ကြည့်လိုက် ရအောင်ေ နာ် ။ (၁) စိတ်ပေါ့ပါးသွားခြင်း စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အရာတွေကို မြိုသိပ် ထားရတာ အရမ်းပင်ပန်း ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မို့လို့ စိတ်ထဲမှာ မြိုသိပ် မထားဘဲ ဖွင့်ချ လိုက်တာ ကောင်းပါ တယ်။ …
မင်းကို အဖက်မလုပ်တဲ့ လူကိုမှ နှလုံးသားထဲထည့်ထားရတာ မပင်ပန်းဘူးလား သူ့စိတ်ထဲမှာ မင်းကို ရှိတယ် လို့တောင် သတ်မှတ် မထားထား တဲ့ လူကိုမှ အတွေး ထဲမှာ ထည့် ထားရတာ မပင်ပန်း ဘူးလား ? အဖက် မလုပ်တဲ့ လူကိုမှ နှလုံးသားထဲ ထည့်ထား ရတာ မွန်းကြပ်ပြီး ပူလောင် မနေဘူး လား ? မင်းကိုယ်မင်း သနားညှာတာ သင့် ပါပြီ ။ သူ့စိတ်နဲ့ ကုန်လွန် ခဲ့တဲ့ ချိန်တွေကို လက်ချိုးရေတွက် ကြည့်ပါ အုံးလား ၊ စားလည်း ဒီစိတ် သွားလည်း ဒီစိတ်နဲ့ မင်းဘဝရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ …